Cumar Dhuule - Wikipedia
Kani waa maqaal ku saabsan fanaanka cumar dhuule cali. Haku khaldin magaca Cumar.
Cumar Dhuule (; ) wuxuu ahaa fanaan ka mid ahaa fanaaniinta ugu caansanaa suugaanta dadka Soomaalida ah. Fanaanku waxuu horaantii 1941dii ku dhashay duleedka magaalada Burco gobolka Togdheer ee maanta ka tirsan dowlad-goboleedka Somaliland. Fanaanku wuxuu ahaa heesaa aad u cod macaan oo geyiga Soomaaliyeed aad looga jecel yahay. Codkiisa wanaagsan darteed waxaa lagu naaneysi jirey Boqorka Qaaciga Fanka Soomaaliyeed.
Janaayo, 01 1941
Burco, Waqooyiga Soomaaliya
Luuliyo 2005 ( 1999–2000 jir)
Kaban, Heeso wadani, qaraami, qaaci, heeso jacayl, qasaa'id
Boqorka Qaaciga, Aabaha hogta
Fanaan Dhuule wuxuu caan ku ahaa heesaha qaaciga ah, garaacida kabanka (gaar ahaan nooca loo yaqaano "cuudka"), saaridda laxanka, abuurista halabuur, samaynta sheekooyinka iyo majaajilada, habaynta ruwaayadaha iyo guud ahaan ka qeyb-qaashada Fanka Soomaalida. Faanaanku wuxuu kamid ahaa dadki dalka ka baxay markii u qarxay dagaalkii sokeeye. Waxa uu na waqti joogay waddanka Suuriya kadibna waxaa uu usoo gudbay waddanka Iswisarland gaar ahaan magaalada Jenefa oo uu waqti ku noolaa.
1 Heesaha Fanaanka
2 Fanka Soomaalida
Fanka Soomaalida waa nidaamka, abuurida, qurxinta, habaynta iyo soo bandhiga heesaha Soomaalida, ruwaayadaha iyo majaajilooyinka u dhaqanka ah dadka Soomaalida ah meelkasta ooy joogaan, gaar ahaan inta ku dhaqan Bariga Afrika. Guud ahaan, fanka Soomaalidu waa nooc ka mid ah Suugaanta Soomaalida. Sidoo kale, dadka ku hadla Af Soomaaliga waxay leeyihiin fan iyo suugaan aad u heersareeya, qani ku ah aqoon iyo xirfad qoto dheer. In kastoo fanka maanta jira yahay mid aad u da' yar wuxuu leeyahay waaxyo iyo noocyo aad u badan. Kuwaasi waxaa ka mid ah heesaha qaaciga, qaraamiga, heesaha jaaska, ruwaayadaha, majaajiloyinka, filimaanta, bandhigyada fanka, qoob-ka-ciyaarka iyo guud ahaan madadaalada ku baxda luuqada Soomaaliga.
Heesta Heyga goosan caawaad iga gacan sareysaa waxaa la qaadda Aamina Feer
""Taariikhda Fanaanka Caanka ah Maxamed Saleebaan Tubeec"". Waxaa laga kaydiyay the original 2016-03-05. Soo qaatay 2016-02-21. Barameter aan la aqoon |ciwaan= ignored (caawin)
↑ [[https://web.archive.org/web/20130329234407/http://www.dhuule.com/2010/06/history-of-cumar-dhuule.html#.VsksJ1Icp81 Archived Maarso 29, 2013 // Wayback Machine Taariikhda Al Fanaan Cumar Dhuule]]
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumar_Dhuule&oldid=214558"
Last edited on 8 Agoosto 2021, at 23:18
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 Agoosto 2021, marka ee eheed 23:18.